Sida loo dadajiyo akhristaha faraha ee taleefankaaga Xiaomi | Androidsis
Sida loo dadajiyo akhristaha faraha ee taleefankaaga Xiaomi
DaniPlay | | Khiyaamada Android, Xiaomi
ka Telefoonada Xiaomi Waxay xulasho weyn u yihiin dhammaan kuwa raadinaya xalka moobiilka tayada iyo qiimaheeda awgood. Qalabka ayaa ugu mahadcelinaya lakabka MIUI Waa mid ka mid ah boosteejooyinka ugu dhammeystiran sababtoo ah habeyntiisa sare iyo qaabeynta, taas oo aan ahayn kiiska soo saarayaasha kale.
Hal shay oo ka dhacaya Taleefannada casriga ah ee Xiaomi waa taas faraha akhristaha mararka qaarkood ugama jawaabo sida ugu dhakhsaha badan ee aad rabto, in kasta oo ay taasi jirto waxaa jirta xeelad lagu dedejinayo qaybtan. Waxay ku dhacdaa Xiaomi Mi 9, laakiin waxaa loo isticmaali karaa dhammaan moodooyinka shirkadda.
1 Sida loo dadajiyo akhristaha faraha
2 Kala duwanaanta Xiaomi
Sida loo dadajiyo akhristaha faraha
Uma baahan doonno wax codsi ah tan, tan iyo Xiaomi waxay isku dartay ikhtiyaarka si loo joojiyo ikhtiyaar si si fiican looga faa'iideysto. Tan waxaa u sabab ah toobiyeyaasha, oo aan demin karno annagoo raacayna tallaabooyinka soo socda.
Waxaan marin u helnaa Nidaamyada> Furaha sirta ah iyo amniga> Waxaan ku fureynaa faro-faneed> Tilmaamo> Jooji Tilmaamaha Faraha. Tan waxaan ku shaqeyn doonnaa toobiyeyaasha ka soo muuqday shaashadda taleefanka, taas oo soo dedejin doonta isticmaalka shaqada akhristaha faraha.
Waa laga dareemi karaa dhammaan qalabka Xiaomi, kiiskan Xiaomi Mi 9 waa mid ka mid ah kuwa ogaanaya aad uga sii badan in la yeesho akhristaha faraha wax yar ka gaabiya moodellada kale. Tilmaamaha ayaa lagu dhaqaajin karaa adoo raacaya isla talaabada oo aad ku siisaa ikhtiyaarka "Firfircoon" haddii ay dhacdo inaad rabto inaad iyaga hesho.
Kala duwanaanta Xiaomi
Xiaomi muddo dheer ayuu shaqeynayay si uu u bixiyo noocyo badan goobaha mid kasta oo ka mid ah taleefannada ay iibiso, marka laga reebo liiska CIT waa mid kale oo ka mid ah qaybaha naga dhigi doona inaan aragno haddii taleefankeennu uu khalad ku leeyahay mid ka mid ah shaqooyin badan oo uu qabto. Khaanadda barnaamijka Waa mid kale oo ka mid ah waxyaabaha uu ku qariyo Xiaomi, halkan isticmaalaha ayaa sidoo kale isticmaali kara xulashadan xiisaha leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Sida loo dadajiyo akhristaha faraha ee taleefankaaga Xiaomi
Cubot X30 hadda waa rasmi: kamarad 48 MP leh AI iyo 128 GB oo keyd ah
Moobaylka Xiaomi 5G oo wata 120 W oo degdeg ah ayaa la caddeeyay wuxuuna ku dhowyahay koonaha